Jikọọ Team Hodges U! Ele anyị Ohere Ohere
Admissions - Ọdịnihu Hawks
Ahụmịhe ụmụ akwụkwọ
Ozi Ego nke umu akwukwo
Akwụkwọ na ụgwọ
Ọrụ ndị agha
Di iche iche di elu
Ntuziaka umu akwukwo ohuru
Akwụkwọ ntuziaka ụmụ akwụkwọ
Akwụkwọ Katọlik Ugbu a
Usoro ndebanye aha na ọnọdụ
Katalọgụ gara aga
Ddị nnyefe ogo
Mụta Banyere Ndị Ọrụ Anyị
Ndi isi obia
Ozi ndị ahịa
Ikike nke Nhazi
Dị njikere isonye ọkwa ọzọ na agụmakwụkwọ ka elu?
Na Mahadum Hodges, anyị raara onwe anyị nye ịnabata naanị ngalaba na ndị ọrụ kacha mma iji kwado ụmụ akwụkwọ anyị n'okporo ụzọ ha ịga nke ọma. Y’oburu n’inwe obi uto inyere ndi ozo aka iru ebum n’uche ha, yabụ anyi n’acho n’otu anyi. Ọ bụrụ na nke a dị ka nke gị, họrọ otu n'ime ohere ọrụ anyị ma nyefee akwụkwọ ikike gị.
Na-akpali. Soro ndi otu Mahadum Hodges taa!
Chọọ maka ohere ọrụ
Banyere Hodges Ọrụ
A mkparịta ụka na Gloria Wrenn, Director nke Ndị Ọrụ Ndị Mmadụ:
Kedu ihe kachasị mma maka ịrụ ọrụ na Mahadum Hodges?
“Isi ihe atọ ga-akpata:
Ndị na-arụ ọrụ ebe a. Anwụ n'ihi na ọtụtụ bụ ezinụlọ nke abụọ, na ahụtụbeghị m ọtụtụ mmadụ nwere ụdị agụụ a ma na-arụkọ ọrụ ọnụ maka otu ebumnuche nke ịme Hodges mahadum kachasị mma ọ bụghị naanị na SW Florida, mana ebe ọ bụla.
Anyị nwekwara ndị ọrụ dịgasị iche iche na nke gụnyere - onye ọ bụla nọ ebe a - ọ dịkwa m ka ọ bụ n'ihi ndị ọrụ ahụ na-anabata ndị sitere na ọdịbendị ma ọ bụ nzụlite ndị ọzọ.
Anyị bụ ndị otu ọhụrụ nzukọ na otú anyị na-ewetara klas na ụmụ akwụkwọ, na aghọwo ihe alụmdi na bụ nnọọ mgbanwe na ike swiftly ịgbanwe dị ka mkpa nke mahadum ma ọ bụ agụmakwụkwọ ka elu ina. ”
Kedu ụfọdụ uru nke ọrụ na Hodges U?
“Mahadum Hodges dị na ogige mara mma nke anwụ na-acha na Fort Myers, Florida, enweghị ụtaba, wee nweta otu Ọrụ Mpaghara Blue designation, (ulo akwukwo izizi nke izizi ime nke a na mpaghara) nke na agba ndi mmadu ume. Na mgbakwunye, ọnọdụ niile nke oge gụnyere onyinye mmesapụ aka nke nwere ike ịgụnye uru ahụike, mkpuchi mkpuchi, na nkuzi nkuzi. ”
Ngalaba na Ahụmahụ Ndị Ọrụ
Kedu ihe kachasị mma maka ịrụ ọrụ ebe a?
Ikiri ndụ ụmụ akwụkwọ gbanwere. Ọ na - eme ka ihe niile m na-eme ebe a nwee isi, ” Teresa Araque, AVP Ahịa / Ọhaneze Mgbasa Ozi
“Ezinụlọ. Enwere m ezinụlọ m "ụlọ" na ezinụlọ m "na-arụ ọrụ" ma enweghị m ike ime n'enweghị onye. Anyị nwere ụbọchị nzuzu dịka nzukọ ọ bụla, mana na ngwụcha ụbọchị ihe anyị na-eme ebe a bụ ezigbo pụrụ iche. Ndị mmadụ na-abịa ebe a ịgbanwe ọnọdụ ọdịmma ezinụlọ ha dum ma anyị ga-enyere aka, ” Erica Vogt, Onye isi oche ndị isi nke Ọrụ Nlekọta
“Otu n’ime ihe kachasị mma n’arụ ọrụ na Mahadum Hodges bụ mmekọrịta chiri anya na nkwado nke ndị ọrụ anyị. Ha bụ ndị kacha raara onwe ha nye na ndị ọkachamara m nweela ihe ùgwù iso m rụọ ọrụ, ” John D. Meyer, DBA, Onye isi ala
Ndị ọrụ were n'ọrụ
Mahadum Hodges bụ onye were ya n'ọrụ ohere ha anaghị akpa ókè na agbụrụ, ụcha, okpukperechi, nwoke na nwanyị, inwe mmekọ nwoke na nwanyị, obodo ya, afọ ya, nkwarụ, ma ọ bụ njirimara ọ bụla echekwara n'okpuru iwu na ọrụ ya. A na-enye onyinye niile nke ọrụ ma ọ bụrụ na ị nyochachaa usoro nyocha na ọgwụ.
Mahadum Hodges bụ nkeonwe, nke na-enweghị ọrụ, nke a kwadoro na mahadum dị na ndịda ọdịda anyanwụ Florida nke bụ isi na-elekọta ụmụ akwụkwọ toro eto.
Enwere ike ịchọta Hodges Annual Security Report (Clery Act Information and Policy) na Crime Stats na: Ibe Ozi Ndị Ahịa. Nkwupụta nche ahụ na-akọwa Hodges Annual Security Plan na Akụkọ Mpụ Mpụ na-edepụta ọnụọgụ na ụdị mpụ ndị emere na ma ọ bụ n'akụkụ ogige kwa afọ.
Ruo na Iwu General Data Protection ("GDPR") dị m, ana m ekwenye na nhazi nke Personal Data m dị ka GDPR si kọwaa maka ebumnuche akọwapụtara ma nye ya na iwu Hodges, ka emeziri site n'oge ruo n'oge oge. Aghọtara m na n'ọnọdụ ụfọdụ, enwere m ikike ịjụ nhazi nke Personal Data m. Aghọtakwara m na m nwere ikike ịrịọ (1) nnweta na Personal Data m; (2) ndozi nke mmejọ ma ọ bụ njehie na / ma ọ bụ nhichapụ nke Personal Data m; (3) na Hodges machibidoro nhazi nke Personal Data m; na (4) na Hodges na-enye Personal Data m n’elu arịrịọ na usoro ebugharị.
FORT MYERS ogige
OZI - Hodges Jikọọ
Nkwado Hodges U Mgbe Sho na-azụ ahịa Amazon!
Pịa na njikọ dị n'okpuru ebe ị na-azụ ahịa na Amazon wee nye onyinye nke nzụta gị na ego Hodges Hawks!
Ị dịla njikere?
Right Copyright Hodges University 2018-2021 | amụma nzuzo | Ozi Ndị Ahịa | Ndi Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges nyere Mahadum Hodges ugwu ka ha nye ha enyi, nzere bachelọ, na nzere masters. Maka ajụjụ gbasara nzere ntozu Mahadum Hodges, kpọtụrụ Kọmịshụ na kọleji na 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 ma ọ bụ kpọọ (404) 679-4500. Ajuju ndi ozo banyere usoro ihe omumu nke Mahadum Hodges, nnabata ihe ndi ozo, enyemaka ego, na ndi ozo, kwesiri ka edughari ya na Mahadum Hodges ma obughi ndi Southern College of Colleges and Schools Commission on Colleges. Usoro ọmụmụ nke usoro ọgwụgwọ ọ bụla na Mahadum Hodges na-ezute ikike ikikere ọkachamara nke steeti Florida. Usoro mmemme ndị a gụnyere Master of Science in Clinical Mental Health Counseling, Bachelor of Science in Nursing, Associate of Science in Physical Therapist Assistant, Akwụkwọ Asambodo na Ahụike Ọgwụ Mberede, Akwụkwọ Asambodo na Paramedics, na Asambodo na Nọọsụ Bara Uru. Mahadum Hodges emebeghị mkpebi ma mmemme ahụ, nke edepụtara n'elu, na-ezute ikikere ikikere ọkachamara nke steeti ndị ọzọ. Studentsmụ akwụkwọ ndị na-ezube ịkwaga na mpụga Florida ga-ekwenye na usoro ọmụmụ ahụ na-eme ihe steeti ahụ chọrọ.
Anyị na-eji kuki na ngwaọrụ nchịkọta data ndị ọzọ iji mepụta ahụmịhe onye ọrụ kachasị mma, iji ghọta nke ọma otu esi eji ya biko gaa na peeji nke iwu nzuzo anyị. Site n'ịnọgide na-eji saịtị a, ị na-enye anyị nkwenye gị iji mee nke a. Ruo ókè Iwu General Data Protection ("GDPR") dị maka m, site na ịga na weebụsaịtị a ana m ekwenye na nhazi nke Personal Data m dị ka akọwara site na GDPR maka ebumnuche ndị edepụtara ma nye ha na amụma Hodges, ka emeziri site n'oge ruo n'oge. Aghọtara m na n'ọnọdụ ụfọdụ, enwere m ikike ịjụ nhazi nke Personal Data m. Aghọtakwara m na m nwere ikike ịrịọ (1) nnweta na Personal Data m; (2) ndozi nke mmejọ ma ọ bụ njehie na / ma ọ bụ nhichapụ nke Personal Data m; (3) na Hodges machibidoro nhazi nke Personal Data m; na (4) Hodges na-enye Personal Data m n’elu arịrịọ na usoro a na-ebugharị.